Cali Khaliif: Sidu laba iskula Helaa?
Soomalidu waxay ku maah maahdaa aduunyada nin noolow maxaa argti kuu laaban.Akhristayaal waxa aan la yaabay oo isku kay qaban waayey xeeladaha iyo hab dhaqameedka ninka yidhi waxaan ahay Aqoonyahan, Siyaasi, Professor, baayacmushtar iwm. Cali Khaliif Galaydh hadaladiisa aan dux lagu ogayn ee uu qurbaha la wareegayo waxa ka mid ah in uu yidhaa ma jiraan wax Somaaliland la yidhaa ,hadana waxa uu sheegaa in ay lacag iyo macaash farabadan ka helo kana faa,iiday Dawlada, Nidaamka iyo Nabada taala Soomaliland.
Soomalilaanta aan ognahay in naf iyo maal badan loo huray Calina imika dambarkeeda dhamayo isla markaana dafirsanyahay duminteedana ka shaqaynayo, Galab dhaweyd oo uu qudbad ka jeedanayeeyey hudheel ku yaala magaalada Toronto iyo waliba waraysiyo uu siiyey Radio Golis iyo Codka Beesha oo labada ku yaala Toronto, Canada. Waxa ka mid ahaa hadaladiisii:
(1)Somaliland wax la yidhaa ma jiraan mana dhacayso.
(2)Dawladii Siyaad Bare kama gar darayn markay Hargaysa madaafiicda iyo dayuuradaha ku duqaysay, waayo dawladuhu sidaa waa yeelaan waana in ay iska celisaa.
(3)Anigu waan u dhashay Soomaaliland cid ii diidi kartaana ma jirto, shirkadahaygana Somaliland lafteeda ayaa u baahan abaalna ku qabta.
(4)Waxa wax lagu qosla ah in ay Bishii May ee 2001kii ay yidhaadeen waxaan u codbixinaynaa Dastuur, waxaaasi waa waqti lumis waliba la yidhi 97ayey u dhacday filimakaa horaan u galnay, kamana dhicin meelaha ay ka midyihiin Sool, Burco iyo meelo kale.
Waa run oo Cali Khaliif waa u dhashay Somaliland waana muwaadin xuquuqdiisa wadanimo leh laakiin waa khaayimay dalkiisa iyo dadkiisa(Traitor) waxanu gacan ku sitaa mididii lagu gowracayey Saca gacanta kalena waa ku lisayaa ee labadaasi ma is qabtaan? in uu Saca hilibkiisa iyo hadhuub caana ah ka wada doono.
Cali Khaliif waxa uu goob joog ka ahaa kulamo iyo shirar badanoo arimaha Somaliland, Somaliya iyo Puntland loo qabtay halkaana waxa ka muuqata in uu dhaan walba ku biirayo waxuu dheeli tiraase aanay jirin.
Guntii iyo gabagabadii waxay ila tahay Cali Khaliif Lacagta uu baayac mushtarka ku galay malaha waa ta meel walba lagu waydiiyo ee la lahaa Qarankii somaliya ee burburay ayuu ka qaatay. Gombashka iyo dheemanta Somaaliland ma gayo in uu gurto kol hadaanu gar waaqsanaynayn gobanimada iyo mudnaanta dadkiisa iyo dalkiisu leeyahay.Hadii aan arintaasi lagu war gelin waxna ka qaban heydaha sharciga iyo ruqsada baayacmushtarka ee somaaliland xaalkiisu wuxuu ahaanayaa geedka waan gownayaa, midhihiisana waan guranayaa-Cajiib-.
Maxamuud Yusuf Ducale